Ezweni kolwazi nobuchwepheshe kuphela ingxenye encane zonke izinto ezisunguliwe. Kodwa iningi izinto ke yakhelwe ukwenza ukuphila kwethu kube lula. Yilokho ukhuluma ngesinye salezo Ukuthuthukiswa ingxoxo iya kule-athikili. Lokhu Push-izaziso. Yini bakuphi futhi lapho kungasetshenziswa? Push-Isaziso - Kuyini? iPhone, i-Android, sici-ecebile amafoni - lapho asethwe futhi kanjani amandla / ukukhubaza nabo?
Hlangana - Push-izaziso
Kuyini lokhu? Ngakho shayela emfushane Izaziso ze-pop-up ezivela ubuchwepheshe touch screen (amaphilisi, amafoni) futhi wazise mayelana izibuyekezo ezibalulekile futhi izenzakalo. angasetshenziswa njengoba ifomu okulula inkhulumomphendvulwano emkhatsini nomthengisi kanye umthengi, okwaholela ukusetshenziswa kwabo kwandile emkhakheni marketing, uma uthanda.
Ngakho, uma sicabanga inketho nesicelo, umsebenzi oyinhloko lapha - ukwazisa ngezibuyekezo, okuqukethwe okusha (noma nje isikhumbuzi ukuthi alisetshenziswa isikhathi eside). Indlela Yokwenza Push-izaziso ukuze uthole uhlelo lokusebenza? Ukuze wenze lokhu, kumele usebenzise i-isikhombi sokuhlela ukusebenza ukuthi ikhona ifoni ethile (eqinisweni, uhlelo lokusebenza esetshenziswa).
Imbangela lobu buchwepheshe kwaba isifiso lochwepheshe ukusekela inombolo yabasebenzisi ezenzekayo yabo. Ukubeka Push isaziso akuyona into enkulu. Ekupheleni kwalesi sihloko sinikeza ulwazi mayelana izici zawo / ukuvala ku wokusebenza ezahlukene.
Lapho kungenzeka ukusebenzisa lobu buchwepheshe? Ake ugxile izibalo ezingaba ngiziqhayise Push-izaziso. Lokho-ke uyosinika, sicabanga kamuva. Ngakho:
Iningi (41%) asetshenziswa ukwazisa mayelana zokusebenza ezintsha noma izibuyekezo akhona.
Khona-ke (24%) ukhuluma ngani ukuthumela Izipesheli.
Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nokuqukethwe omusha uvele uhlelo isetshenziswa 14% of amacala.
Kunabo bonke okubhekiswe (12%) asetshenziselwa ukuthumela ukukhangisa kanye / noma yokudlulisela link.
Labo abasele abanga-9% ezinye izinhlobo zolwazi.
Uma ungezi Push-izaziso labo ozibhalisele, kodwa musa ukushintsha izilungiselelo, lokhu akusho ukuthi ngeke neze. Mhlawumbe, inkinga yayingekhona nje uxhumano eziphukile. Uma - unjiniyela, kusho ukuthi into engalungile usubekwe in the izicelo ngokwabo.
ukumaketha Isiteshi esisha
Ngaphambi kokuba sicabangele ukuthi basebenzisane ubuchwepheshe, kusukela iphuzu Ngenxa umsebenzisi, bangase bachithe isikhathi esincane kakhulu futhi ukhulume nomqondo Push-izaziso zokumaketha. Lapho usebenzisa i-kwanda kufanele ziqashwe ukuze singathwesi ukuhambisa umugqa omncane ehlukanisa ukubambisana obsessions. Uma lezi imigqa ofunda marketer noma umuntu ethola imfundo efanele, kumele ukhumbule ukuthi le ndlela kumele anikezwe ulwazi oluyigugu ukuthi uzokufa ukuboniswa nokuxhumana okwalandela.
Push-izaziso kufanele kuqukathe okuqukethwe esifike ngesikhathi futhi afanele. Ngokwesibonelo, e isicelo ukuthi kuhloswe izingane, ikhofi izikhangiso kuyoba kakhulu endaweni, nakho kungenzeka kuholele ekulahlekelweni ukuthandwa.
Isibonelo sokusetshenziswa kwazo
Isicelo ethandwa lobu buchwepheshe ukuze isaziso lolufinyetiwe isinyathelo labangane. Ukucabangela lesi, singakhumbula le "Twitter", okusho yazisa abasebenzisi bayo mayelana nezinguquko abasafufusa amaphrofayli abangane.
Ezinye izinkampani i-GPS, ukucacisa lapho amakhasimende abo, futhi uma kuzovala esidayisa yabo, isaziso. Okuqakathekileko nesikhathi kokuthola umyalezo. sici Realizable kanje, Push-izaziso akudingeki Ukufinyelela i-Inthanethi, ngoba ngokuvamile lonke ulwazi olufanele lilondolozwe isicelo ngokwalo (njengoba umthetho).
Ngakho, uma kwanqunywa ukusebenzisa Push-izaziso njengengxenye ukumaketha uhlelo lwakho, ngeke uze kahle ukuze uqinisekise ukuthi ukuhlangabezana nemibandela elandelayo:
okuqukethwe okuhlinzekwe kumele kube zamanje futhi olufanele.
Kufanele bakwazi ukuphuma.
Kuyinto efiselekayo ukuthi abophele Izinhlelo zokuxhumana zomphakathi zivumela abasebenzisi ukuxoxa.
Kuyadingeka ukuba kahle ukhethe inqubomgomo ambalwa - ukuthola 20 izaziso ngosuku akekho noma isiphi isifiso.
Manje ungakwazi ukuqhubeka ukusebenza kwalo buchwepheshe. Ukuze kube lula inqubo ukuqonda lihlukaniswe kuncike ohlelweni lokusebenza efakwe idivayisi ephathwayo. Ngakho, indlela wamisa Push-izaziso?
Lona ethandwa kakhulu yesistimu yokusebenza, okuyinto wathola isimo salo sibonga yokwanda khulula nokuthuthukiswa ngokuqhubekayo. Njengoba mina ivuliwe / off Push-izaziso kuso? Ukuze ukhubaze kumelwe enze izinyathelo ezilandelayo kule oda:
Hamba kuzilungiselelo efonini yakho.
Hamba ku-akhawunti yakho, bese - kwisaziso, futhi kakade bakhona ukubona ulwazi mayelana Push.
Khetha izilungiselelo oyifunayo, imikhawulo ekutholeni - ngokuvamile, wenze njengakho konke ofuna.
Kodwa kuthiwani uma ufuna ukunika amandla / ukukhubaza Push isaziso alulona olwawo wonke umuntu, kodwa kuphela isicelo esisodwa? Leli cala liphinde iza algorithm:
Iya iphuzu ezifana "isaziso".
Kube izokwethulwa kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ezifakiwe efonini touch, futhi kufanele ukhethe into yakho ngokuchofoza kuyo.
Khubaza noma nika amandla reception imilayezo eminingi evela ohlelweni.
Njengoba ubona, ukuqaliswa lezi zenzo kungekho inkinga enkulu, futhi hhayi nje "Android" yesistimu yokusebenza. Push-izaziso waphenduka kalula on / ukuvala, namanye amadivayisi.
Njengoba lisetshenziswe lapha zihlanganisa Push-izaziso? iPhone ne-iPad akahlukile lapha. It sizoxoxa ukusebenza ngobuchwepheshe isimiso odlule. Ngakho, ukuze vumela noma vimbela imiyalezo etholakele izinhlelo ezithile, udinga ukwenza ukulandelana elandelayo yezenzo:
Iya sasekhaya kudivayisi yakho futhi uthole le nkinobho libukeka umbuthano double, okuyinto sibonelo komgwaqo siyahluka ku izinkomba ezimbili ngesikhathi nge-90 degrees.
Thola inkinobho "isaziso", bese - isicelo ukuthi unesithakazelo.
Ngaseceleni iphuzu "Vumela Izaziso" uzobona inkinobho, ukuvalelwa isilayidi. Ukunika amandla / ukukhubaza isaziso, chofoza kukho. Uma simhlophe, kusho ukuthi umyalezo owamukelwe akuvulekile. Esimeni lapho inkinobho oluhlaza, usuvele uthola izaziso ukusuka kulolu hlelo.
Futhi indlela ukukhubaza le milayezo nhlobo? Ukuze wenze lokhu, ukulandelana elandelayo yezenzo:
Hamba ku-akhawunti yakho.
Yenza ukulungiswa ku ngokusuka kubo.
Nakhu ukuthi unike amandla Push-izaziso ku-iPhone. Njengoba sazi ukuthi izilungiselelo engashintshi kakhulu kakhulu, inkinga nge ushintsho nemingcele ku izinguqulo ezihlukene kufanele kuphakama.
yezinhloso eziningi ifoni
Kufanele kuqashelwe ukuthi kuleli cala ukusebenza Push-izaziso kuphela onobuhle ezithile, kanye umkhuba jikelele lokhu umsebenzi is hhayi kuluthola. Kodwa uma ungumnikazi ucezu imishini, sinikeza ngijwayele indlela ukuvumela / ukuvimbela ifoni efana kwalokho. Qaphela ukuthi indlela ingase yehluke kuye ngesistimu imodeli, ngakho uma ungenawo ukuthola kudingekile ngenxa imiyalelo esihlokweni, kufanele abheke kwenye indawo:
Kusukela kwesikrini main, chofoza "Imenyu".
Khetha "Izilungiselelo" bese ubheka «Push-izaziso." Zingenziwa zibe ehlukile sub-menu noma "Izilungiselelo ifoni noma ukuxhumana."
Ukusetha i-lobu buchwepheshe ukuze ukunambitheka yakho.
Lapha sahlola Push-izaziso, ukuthi kuyini, kungani kudingeka. Ekugcineni ukukhumbula izikhathi aphuthelwe ngaphambili. Push-izaziso bayigugu ngokuya ukumaketha kanye nokusetshenziswa okufanele ngempela kungaletha izinzuzo ezinkulu ibhizinisi futhi wenze ukuphila kube lula ukuze abathengi. Kodwa kuzo zonke kumele zithobele kusho segolide.
Push-izaziso bayigugu iqiniso lokuthi uma kukhona isicelo futhi ayidingi ukusatshalaliswa njalo kolwazi egameni bo khe zwa ngalesosikhathi ingasetshenziswa ngezinjongo zokukhangisa, ukuhlinzeka ithuba yabanye onjiniyela noma amabhizinisi (izinkampani) ukwazisa umsebenzisi mayelana nemicimbi entsha. Kodwa kubalulekile ukuba acabangele kulesi simo, izinto elisitshela zona tematichnost.
Amanani (MegaFon) "Transition to Zero": Izibuyekezo ababhalisile
Siyini isisekelo. Umlando. Temdzabu. ucwaningo lwesayensi